ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၁၉၈၈ ကစပြီး ဒီနေ့အထိ မတရား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပီး တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ နေ့စွဲတွေ – Shwe Yaung Media
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၁၉၈၈ ကစပြီး ဒီနေ့အထိ မတရား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပီး တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ နေ့စွဲတွေ
၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ကနေ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိနေအိမ်အကျယ်ချုပ်။တစ်ဆက်တည်းနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကို နောက်ထပ် ၃ နှစ်သက်တမ်းတိုးပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၁၀ ရက်နေ့အထိ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်….
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ကရန်ကုန်ဘူတာကြီးမှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်မေလ ၆ ရက်နေ့အထိ အကျယ်ချုပ် ခံခဲ့ရပါတယ်….
ဒီပဲရင်းအရေးအခင်းအပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၀ရက်နေ့မှာ အင်းစိန်ထောင်ထဲ ၃ လ လျှို့ဝှက်ချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီး အဲ့ဒီကနေ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မေလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ နေခဲ့ရပါတယ်….
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၀ ရက်ကနေ ၁ နှစ် သက်တမ်းတိုးပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၆ ရက်နေ့အထိ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် နေခဲ့ရပါတယ်….
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ပြည့်ဖို့ ၁ ပတ် အလိုမှာ ယက်တောကိစ္စ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ၁ နှစ်နဲ့ ၆ လ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နေခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့အထိပါ….
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကနေ ဒီနေ့အထိစစ်ကောင်စီက မတရား ဖမ်းဆီးထားပြီး တရားစွဲဆိုထားပါတယ်….ပြစ်ဒဏ်တွေ အားလုံးကို ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်း ၁၅ နှစ်တိတိ၊ ရက်ပေါင်း ၅၄၇၅ ရက်ကိုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါတယ်….
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝနဲ့ နေထိုင်ရတဲ့ ကာလတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ အခြားထောက်ပံ့မှုတွေကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်က လုံးဝလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ အစားအသောက် မလုံလောက်တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ပြီး၊Hunger Strike အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့် ဆံပင်တွေကျွတ်ပြီး အိပ်ရာကမထနိုင်တဲ့ အချိန်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ပရိဘောဂတွေကို ရောင်းချပြီး ငွေကြေး အသုံးပြုခဲ့ရတာတွေ ရှိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူနေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံခဲ့တဲ့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းက”ရေဆန်လမ်းကအပြန်” ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ်….
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၁၉၈၈ ကစၿပီး ဒီေန႔အထိ မတရား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းပီး တရားစြဲဆိုခံရတဲ့ ေန႔စြဲေတြ
၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ကေန၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔အထိေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္။တစ္ဆက္တည္းေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကို ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္သက္တမ္းတိုးၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတယ္….
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ကရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ေမလ ၆ ရက္ေန႔အထိ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခံခဲ့ရပါတယ္….
ဒီပဲရင္းအေရးအခင္းအၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀ရက္ေန႔မွာ အင္းစိန္ေထာင္ထဲ ၃ လ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရၿပီး အဲ့ဒီကေန ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ေနခဲ့ရပါတယ္….
၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀ ရက္ကေန ၁ ႏွစ္ သက္တမ္းတိုးၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေနခဲ့ရပါတယ္….
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျပည့္ဖို႔ ၁ ပတ္ အလိုမွာ ယက္ေတာကိစၥ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ၁ ႏွစ္နဲ႔ ၆ လ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔အထိပါ….
၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကေန ဒီေန႔အထိစစ္ေကာင္စီက မတရား ဖမ္းဆီးထားၿပီး တရားစြဲဆိုထားပါတယ္….ျပစ္ဒဏ္ေတြ အားလုံးကို ေပါင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္စုစုေပါင္း ၁၅ ႏွစ္တိတိ၊ ရက္ေပါင္း ၅၄၇၅ ရက္ကိုေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘဝနဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္….
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘဝနဲ႔ ေနထိုင္ရတဲ့ ကာလေတြမွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ အျခားေထာက္ပံ့မႈေတြကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က လုံးဝလက္မခံခဲ့ပါဘူး။ အစားအေသာက္ မလုံေလာက္တဲ့အခ်ိန္ေတြရွိခဲ့ၿပီး၊Hunger Strike အစာငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့တာေၾကာင့္ ဆံပင္ေတြကြၽတ္ၿပီး အိပ္ရာကမထႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ပရိေဘာဂေတြကို ေရာင္းခ်ၿပီး ေငြေၾကး အသုံးျပဳခဲ့ရတာေတြ ရွိတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့တဲ့ ေဒၚခင္ခင္ဝင္းက”ေရဆန္လမ္းကအျပန္” ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္….
အခြေခံပြည်သူလူထု အခက်တွေ့စေတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း၊စက်သုံးဆီဈေး ကြီးမြင့်မှု ဂယက်
ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ဂေဟာက ကလေးတွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက်သွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ နွေးနွေးချစ်ဖွယ်